Messi Oo Go’aan Kadis Ah Qaatay..Waji Gabaxii Barcelona Ka Dib | Xaqiiqonews
Messi Oo Go’aan Kadis Ah Qaatay..Waji Gabaxii Barcelona Ka Dib
Warbaahinta Isbaanish ah ayaa qoraalo ka qoray go’aan ka tagis ah oo uu xiddiga reer Argentina ka qaatay kooxda Barcelona.
Sida ay ka dhawaajisay idaacadda “Cadena Kobe” radio, Messi ayaa iskaga tagaya kooxda Barcelona, ka dib guuldarradii waji gabax aheyd ee kooxda ay kala kulantay dhigeeda Bayern munich ciyaartii afar dhamaadka ee Champions League-ka.
Idaacadda ayaa sheegtay in Messi uu ka war sugaayo falcelinta maamulka kooxda, ka dib markii kooxda ay ka hartay xilli ciyaareedkan cimaamad la’aan.
Messi ayaa dhowraaya in kooxda lagu sameeyo “dib u habeyn””, madaama uu ka xanaaqsanyahay xaaladda kooxda ee xilligan, oo ay isku raaceen guuldarrooyin badan, laga soo bilaabo guuldarradii kooxda ay kala kulantay Roma, waxaa u raacday tii Liverpool, ugu dambeyn guuldarradii dullinimada aheyd ee kooxda ay kala kulantay Bayern Munich, oo Barcelona looga adkaaday 2-8.
Idaacadda ayaa sheegtay heshiiska Messi uu kooxda Barcelona kula joogo in uu ku egyahay 2021, isagoo sanadkaasi ka dib kooxda uga tagi kara beeca xorta ah.